Xubin katirsanaa Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Bakool - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXubin katirsanaa Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Bakool
September 12, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Xubinta katirsanaa Al-Shabaab ee ciidamada isku dhiibay. [Isha Sawirka: Radio Muqdisho]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xubin katirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab ayaa isku dhiibay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan degmada Xudur ee gobolka Bakool, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda maanta oo Khamiis ah.
Xubinta oo magaciisa lagu sheegay Yarow Xasan Aaadan oo Seyfulaah looga dhexyaqiin maleeshiyada ayaa sheegay in uu ka tanaasulay fikirkiisa, wuxuuna codsaday in la cafiyo uuna diyaar u yahay in uu ka qeybgalo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waxa uu sheegay in uu ka soo dagaalamay gobolo badan oo kuyaala Soomaaliya, uuna Al-Shabaab u qaabilsanaa isku xirka ciidamada.
Security beef up in Garowe ahead of investment conference
Puntland oo sheegtay in ay si buuxda ugu diyaargarowday shirka maalgashiga
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ayaa maanta oo Axad ah markale kulan looga hadlayo colaada Gaalkacyo waxa uu ku dhexmaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo hadal ka [...]